Ny fomba Hitsena ny Tovovavy tsara Tarehy tao amin'ny Aterineto. Ny Tratry Hustler
Inona no azonao atao raha tena saro-kenatra sy unconfident zazalahy? Tsy mahalala ny toerana mba hahitana ny fanahy vady. Ny valiny dia mazava: hihaona ankizivavy ao amin’ny Internet. Misy lehilahy eto amin’ity tany ity, dia nanonofy ny mba hihaona tovovavy tsara tarehy ary manomboka ny fiarahana aminy. Mafy izahay mahatsapa fa isaky ny ankizilahy iray afaka hanatratra izany, ka dia eto isika izao samy hafa ny soso-kevitra sy ny tricks ny haka ny fifehezana. Manantena izahay fa ianao mandany fotoana be dia be amin’ny isan-karazany ny tambajotra sosialy, niparitaka be ny toerana sy ny surf fotsiny azy ireo, na dia mety hihaona olona iray zato heny. Tsy misy na inona na inona mafy. Vao mahita ny mampiaraka toerana list, mifidy ny toerana tianao ny ankamaroan’ny ary manomboka mifampiresaka. Ianao dia afaka mahita ny lisitry na mampiasa Facebook, Instagram, Twitter, sns. Ok, rehefa vonona amin’ny mampiaraka toerana na tambajotra sosialy hafa, tonga ny fotoana hihetsehana. Eto dia nivory ny sasany ny toro-hevitra ho an’ny fahombiazana resaka, ary mazava ho azy fa vokatra tsara.
Foana ny mampakatra ny ny sary. Tokony ho tsara kalitao sy somary mampiseho ny toetra. Ianao koa tsy mila mamorona albums amin’ny adala anarana»Ahy»,»Isika dia eo amin’ny natiora»sy ny sisa. Aoka ho vitsy ny sary, fa mangatsiatsiaka tsara. Tsy misy tokony hanoratra ny tantaram-piainany manontolo na tantara mampihomehy avy ao amin’ny lasa.
Manoratra momba ny tenanao toy ny succinctly, fohy sy mahaliana. Izany no ho voalohany vaovao fa ny ankizivavy iray mahita eo amin’ny pejy. Miezaka ny hahazo ny liana sy mpijery. Soraty vitsivitsy mamirapiratra teny izany fa izy dia manana faniriana mba hanontany anareo fanontaniana sy hanohy ny resaka.
Aza mody olon-kafa
Raha toa ka mbola te-hahafantatra ny fomba hitsena ny ankizivavy ao amin’ny Internet sy ny lelam-pitana azy, ny valiny dia tena tsotra: fotsiny ny tenanao. Farafaharatsiny izany, dia tena hisarika maso tanteraka. Tsy mamorona na inona na inona ny tantara, play adaladala andraikitra sy ho mandrakizay ny fihenjanana. Ary noho izany, ianao dia ho toy ny aina toy ny azo atao ary matoky ny tenanao. Inona koa no zazavavy iray izay mila fanampiana. Ny zava-dehibe indrindra dia tsy ho solafaka amin’ny tediousness. Maha-tena dia tsy midika ho toy ny anao ny ray aman-dreniny, na ny namany. Tadidio fa ny tanjona dia mba mahaliana ilay ZAZAVAVY, ary tsy mba hahazo iray hafa virtoaly namana. Na dia amin’izao fotoana izao ianao mifandray amin’ny folo ny tovovavy mandritra izany fotoana izany, ny tsirairay amin’izy ireo dia tokony hahatsapa ho toy ny raha manana ianao. Ny tsirairay amin’izy ireo dia manana ny toetra amam-panahy, ny fialam-boly, manokana fomba fiainana. Ary izany dia midika fa ny fomba ny tsirairay amin’izy ireo dia tsy maintsy hitovy manokana iray. Mampiseho manovaova sy ny saina. Zazavavy tia ny saina fotsiny isika olombelona hatao. Noho izany, miezaka araka izay azo atao mba hampiseho azy ny liana eo amin’ny fifandraisana. Ireo toro-hevitra tsotra dia hanampy anao hahatratra ny vokatra tsara amin’ny mifampiresaka amin’ny ankizivavy, ary indray andro any mety hifanena ny fanahinao vady
← Hanatevin-Daharana - Mpianatra - Afs
Ny lahatsary amin'ny chat ankizivavy - dia tranonkala maimaim-poana amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy →